Abasebenza ngokujulile i-Hole Gun Abakhiqizi | I-China Deep Hole Gun idonsela amaFektri nabaphakeli
Ukushayela izibhamu kuyithuluzi elikhethekile lokusika elisetshenziswa emshinini wokumba ngezibhamu. Ama-Drillstar 's brute one-flute gun frows Drill onezimpahla ezilandelayo: Ububanzi be-ububanzi: 3 - 40mm ubude BONKE: I-5000mm (ubuningi) Uhlobo olulodwa olunemfudumalo luhlobo olujwayelekile kunazo zonke. Futhi esetshenziswa kakhulu. Kuqukethe uhlobo olulodwa lwe-carbide Drill bit ne-iron Drill bit enama-carbide insert. Ishubhu ne-shank kwenziwa ngezinto zensimbi. Futhi ngokusebenzisa ukwelashwa okushisa. Lezi zingxenye ezintathu zibekiwe njengethuluzi eliphelele. IDrillstar ithengisa ngesibhamu ...
Izizathu zezinkinga Hole degree yokuphambuka imbi kakhulu. Isisebenzi sendawo asifakwanga kahle noma esilungiselelwe kahle. Umhlahlandlela wokudonsa awulungele, isikhala esikhulu phakathi komhlahlandlela wokushayela nesibhamu sokushayela gun Akukho ukusekelwa okuhle kwesibhamu sokushayela izibhamu. Isakhiwo sezinto zokusebenza asilungile, njengokuqiniswa kogqinsi lokusebenzela kukhulu kakhulu, futhi nenkinga yezinto ezibonakalayo njengokuthi ayikaze ibe njalo. Ukuqina kwe-Hole kubi kakhulu ijubane elijikelezayo le-spindle, izinga lokondla lihamba kancane. Ukusika uwoyela akulungile;
Ukushayelwa Okushayelwe Izibhamu Lokhu kuqhutshwa kunanoma yimuphi ububanzi kusuka ku-11.52mm kuya ku-50mm. Osayizi aba-5 kuphela abafaka lonke uhla. Ukufakwa kulungile ngqo futhi akudingi ukulungiswa ukukhiqiza ngosayizi wama-bores. Ukushayela usebenzisa i-screwed in pads guide Pated pads nakho kuyatholakala. ISIQINISEKISO Ukuhlukahluka okusetshenziswa kuma-lathe, izikhungo zemishini nemishini yembobo ejulile. Ukusebenza kahle okuphezulu okwenziwe ngokuqinile okusika umphetho wejometry yokwakheka kwe-chip ye-diea Kunciphisa isikhathi sokuphumula okubangelwa ukushintshana okusheshayo ...
Ama-Solid Carbide Gun Drill DIAMETERS KUVELA .0393 1.0 (1.0 MM) TO .4375 ″ (11.1 MM) IZINSUKU ZECUT KUKUSUKELA ku-5 127 (127 MM) - 14.17 360 (360MM) Ukufakwa kwe-Solid Carbide kukhiqizwa njengengxenye eyodwa ye-carbide. Ithiphu ne-tube kungumkhiqizo wocezu olulodwa osusa ukuhlanganiswa kwesiqaqa ekhanda kanye noguquko kweshubhu. Ngaleyo ndlela kuphumele Ithuluzi eliqine kakhulu, elinamandla. Ukudonsa okuningana okuncane kakhulu kusizakala kakhulu ekugxilweni okuqinile kwe-carbide ngoba kuthela okuphezulu kakhulu ...
Chip Box Flexible bushings epulasitiki welula phezu kwe-carbide gun drill tip kanye nenkontileka ngaphezulu kwensimbi tube yokumisa ukuqhutshelwa phezulu nokudlidliza. Umgodi ohlanganisiwe ngezindlela eziqinile zokuqina kwesibhamu.